Iflethi okanye indlu ekwicomplex elungisiweyo eneendawo ezintle onokuzibona - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex elungisiweyo eneendawo ezintle onokuzibona
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDarran
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex eseA Ukufikelela lula kwi-Alpe d 'heez ngephakamiso ecacileyo. Ngexesha lasehlotyeni kukho izinto ezahlukahlukeneyo ezenziwayo eziquka ipuli yokuqubha, i-archery, i-tennis, ukunyuka intaba ngebhayisekile kunye negalufa encinci!
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa ikwindawo yokuhlala emazantsi eentaba ibe ineebhalikhoni ezimbini, enye ijongene ne-piste (ukusuka kwigumbi lokulala) kunye nenye indawo enkulu ejongene neentaba.
Le flethi ilungele abantu abayi-6 (kucetyiswa abantu abayi-4) ibe inegumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini, igumbi elahlukileyo (akukho mnyango) elineebhedi eziyi-2 ezikhweleneyo kunye nesofa kwigumbi lokuhlala. Ilungele usapho, izibini ezithandanayo okanye iqela elincinci labahlobo. Indawo yokupaka esimahla iyafumaneka phambi kwendawo yokuhlala.
Kutheni sicinga ukuba ufanele ukhethe iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex? Ngaphandle kweflethi okanye indlu ekwicomplex entle, ukutyibiliza ekhephini nokubona iindawo ezintle, sifuna ukwenza ukuhlala kwakho konwabise ngakumbi ngokubonelela ngezinto ezisisiseko, izinto zokucoca (kuquka umatshini wokuhlamba izitya) nezihluzi zekofu. Injongo yethu kukwenza wonwabele iholide yakho kangangoko kunokwenzeka.
I-Auris en Oisans yindawo yosapho, ekwiimitha eziyi-1600 kunye neentlobo ezahlukeneyo zeepistes. I-Auris en Oisans idibene nesitulo ukuya kwi-Alpe D'Huez equka iikhilomitha eziyi-250 zeepistes kunye neyona ndawo inde ebalekayo eYurophu (iikhilomitha eziyi-16 ukusuka kwi-3330m). Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekufutshane kakhulu nendawo ekudityanelwa kuyo kwisikolo sokutyibiliza kwikhephu, ukuqesha nge-ski, iivenkile
Umbuki zindwendwe ngu- Darran
Love for travel and being outdoors
Iinkcukacha zoqhagamshelwano zomntu ohlala kwisayithi ziza kunikezelwa, ziza kuba ngoyena mntu uqhagamshelana naye ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa siza kuhlala sikhona kuwe ukuba unemibuzo ngaphambi nasemva kokuhlala kwakho.
Nceda ungoyiki ukubuza nayiphi na imibuzo.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano zomntu ohlala kwisayithi ziza kunikezelwa, ziza kuba ngoyena mntu uqhagamshelana naye ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa siza kuhlala sikhona kuwe ukuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Auris